Uguqulo olutofotofo lwe-rustic barn enamagumbi ama-3
Indawo yokuhlala evulekileyo ebandakanya ikhitshi, indawo yokutyela kunye neendawo zokuhlala kunye namagumbi okulala amathathu anobunewunewu, amagumbi amabini okumkani aphindwe kabini kunye nelinye, eline-en-suite kwi-master kunye negumbi lokuhlambela elongezelelweyo.
Ifakwe ngokupheleleyo ikhitshi eqinileyo yomthi oqinileyo kunye neendawo zokusebenzela zequartz, itafile eqinileyo yokhuni olulodwa lwezihlalo ezi-6 kunye neendawo zokuhlala ezithambileyo.
Iingcango eziphindwe kabini zivuleleka kwithayili yabucala.
Igumbi lokulala elikhulu lixhamla kwi-en-suite eneshawa yokuhamba; Igumbi lokuhlambela elibekwe kakuhle lisebenza kwigumbi lesibini elinesibini kunye nelinye igumbi elinye.
5* umgangatho weebhedi zeHypnos ezenziwe ngomsonto oyi-200 welinen yebhedi yomqhaphu yase-Egypt
I-Smart TV ineendawo zokuhlala kunye nakwigumbi lokulala eliphambili
Onke amagumbi ayazuza ngokufudumeza ngaphantsi.
Ibroadband ekhawulezayo iyafumaneka kwipropathi iphela.